:: My Little World ::: လူဘ၀နဲ့စာသင်ခန်း ခြားနားမှု့ 
Posted by Nay Nay Naing at 10/29/2008 08:54:00 PM
songabit noisy. smell of black. someone else fancy. but not me sorry :)
Thursday, October 30, 2008 6:59:00 AM
Thursday, October 30, 2008 1:33:00 PM
ကျွန်တော်လဲ စိတ်ထဲလေးလံနေတဲ့ အခါမျိုးမှာ ဇော်ဝင်းထွဋ် သီချင်းတွေ နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။
Thursday, October 30, 2008 1:57:00 PM
အသက်ကြီးလာလို့ လား မသိဘူး၊ ….တဲ့။
အံမယ်လေး….မမရယ်…..မမက ဒီလိုပြောတော့ အနော်တို့ အရွယ်တွေ နေစရာမရှိတော့ပါလားဗျာ…. အဟင့်ဟင့်….
ကလေးကို ဖိအားမပေးတဲ့ မနေနေနိုင်ရဲ့ အဖေနဲ့ အမေကို သဘောကျမိပါတယ်။ ကျနော်တို့လည်း သမီးကို ဖိအားမပေးမိအောင် အမြဲသတိထားရတယ်။
အမှန်တော့ ပထမ မရတာကို ပူဆွေးနေမယ့်အစား နှစ်သိမ့်ဆုလောက်နဲ့ ပျော်ပိုက်တတ်ရင် ဘ၀က တော်တော်ပျော်ဘို့ ကောင်းမယ်လို့ သဘောရတယ်။
အခုတော့….ကျနော်တို့အားလုံးက ပထမဆုနောက်ကို ပြုံလိုက်နေကြတာလေ။ လက်တွေ့မှာ ပထမက တယောက်ဘဲရမှာ ဆိုတော့ ကျန်တဲ့လူအားလုံး အသီးသီး အသက အသက ဘူပိတ်ကုန်ကြတာပေါ့။
Thursday, October 30, 2008 5:03:00 PM
ပထမ ရဖို့သေချာအောင် တစ်ယောက်ထဲပြိုင်မယ်လေ။
ဟိုး... ငယ်ငယ် ကျောင်းနေတုန်းက အကြောင်းအရာတွေ ပြန်တွေးမိတဲ့ အခါတွေတိုင်း အတော်လေး စိတ်ချမ်းသာတယ်...
Steve Evergreen >> ဘာအဓိပ္ပါယ်နဲ့ ရေးသွားတာလဲဆိုတာ သိပ်ပြီး နားမလည်ဘူး...
Sin Dan Lar >> ရေးထားတာတွေ ဖတ်သွားကြောင်း သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူး :-)
MrDBA >> တူတာပေါ့။ ကျွန်မ စိတ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်တွေဆို တခြား သီချင်း ခပ်အေးအေးတွေ နားထောင်မရဘူး။ ခေါင်းပိုရှုပ်သွား သလိုပဲ။
Ko Paw >> ကိုယ့်အသက်အရွယ်ကိုယ် မေ့သွားမှာစိုးလို့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်ပြီး သတိပေးနေတာပါ။ :D
ကိုပေါရဲ့ သမီးလေးကို အတင်းဖိအားပေး မခိုင်းတာ ကောင်းတယ်။ ကျွန်မ အမေနဲ့အဖေက ကျွန်မတို့ ကို တစ်ခုခု လုပ်စေချင်၊ ဖြစ်စေချင်တယ်ဆို အေးအေးဆေးဆေး ရှင်းပြတယ်။ နားဝင်အောင်ပြောတယ်၊ ဘယ်တော့မှ အတင်း မတိုက်တွန်းဘူး။ ကျွန်မတို့လုပ်ကိုင်တာတွေ ဖြစ်မလာရင်လည်း ဘယ်တော့မှ မဆူဘူး။ ကိုယ့်ကြိုးစားမှု့ လို သွားတာကြောင့်ဆို ဘာကြောင့်၊ ဘာတွေလိုတယ်ဆိုတာ ပြောပြတယ်။ ငယ်ငယ်ကဆို ဟိုဟာလိုချင် ဒီဟာလိုချင်တွေ ရှိတာပေါ့။ ကျွန်မတို့မရနိုင်တဲ့ အရာတွေဆို ဘာကြောင့် မရနိုင်တာလဲဆိုတာ ပြောတယ်၊ လိုချင်တယ်ဆို ကိုယ်ရနိုင်တာထဲက အကောင်းဆုံးအရာကို ရအောင်ယူပြီး ကျေနပ်နေတတ်အောင်ပဲ လမ်းညွန်ပေးတယ်။ ကျွန်မ မိဘတွေက ဆူဆူပူပူ မလုပ်တော့ တစ်ခုခုဆို အိမ်ကိုပြန်ပြောပြဖို့မကြောက်တော့ဘူး။ လိုချင်တာရှိရင် တကယ် ကြိုးစားလုပ်မှ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိနေတယ်။ မအောင်မြင်ခဲ့ရင်လည်း အရှုံးကို ရင်ဆိုင်ဖို့သိပ်မကြောက်လန့် တော့ အရမ်းကြီး ၀မ်းနည်း မနေတတ်တော့ဘူး။ အောင်မြင်မှု့ မရတာ ဘာကြောင့်လဲ၊ ကိုယ်ဘက်က လိုသွားရှိရင် ဘာတွေလိုသွားလဲ၊ နောက် ဒါမျိုး အဖြစ်မခံချင်ရင် ကိုယ်ဘာတွေ လုပ်ရမလဲ၊ ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲ ဒီလောက်ပဲ တွေးမိတော့တယ်။ ပြောရမယ်ဆို အများကြီးပါပဲ.. ..
အမေနဲ့အဖေ ကို ဒါတွေတွေးမိတိုင်း၊ ကြုံရတိုင်း အမြဲ ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်..
မမွန် >> တစ်ယောက်တည်း ပြိုင်ပြီး ဆုတစ်ခုမှ မချိတ်တာတွေလည်း ရှိနိုင်တယ်လေ. :P
မျိုးကျော်ထွန်း. >> ဒါအသက်ကြီးလာတဲ့ သဘောပဲ..
Friday, October 31, 2008 2:54:00 PM